Last update: Thursday, December 19 2019 - 19:22:11
Tuesday March 10, 2015 - 13:05:53 in Xiriirka Kubadda Cagta by Nocsom Editor
Elman ayaa shalay qaabishay kooxda Somali Fruit oo sanadki ugu horeeyay ka qayb qaadanaysa horyaalkaa Heerka 1-aad ee dalka , waxaana qaybta hore ee ciyaarta lagu kala nastay 0-0 oo ay xagga fursdaha ku gacan sareeyeen da'yarta Somali Fruit.
Markii laysku soo laabtay Elman oo kaashanaysa ciyaartoyda waayo aragga ah ee kooxda ku sugan ayaa hogaanka ciyaarta la wareegtay daqiiqaddii 55-aad ka dib markii uu gool si xirfdaysan u dhaliyay Cabdullahi Nuur Macalin oo No.18 u sita kooxda Elman.
Somali Fruit oo dadaalka ugu jirtay in ay iska soo barbarayso goolka lagu lahaa ee daynta ayaa gool labaad uu daqiiqadi 86-aad kaga naxsaday kabtanka Kooxda Elman Sacad Salax Xuseen , waxayna 2-0 guusha ku raacday kooxda Elman.
kooxda Elman ayaa iminka leh 16 dhibic kaalinta sedexaad ayayna kaga jirtaa horyaalka dalka, kabtanka ELman Sacad Saalax Xuseen ayaa shalay dhaliyay goolkii 6-aad ee horyaalka waxuuna gool dhalinta kaga jiraa kaalinta sedexaad.
Guushan ayaa kooxda Elman u suura gelinaysa in ay ku dagaalanto ku guuulaysiga horyaaka kubada cagta dalka Nationlink Championship 2014-15.